छोरीसंगै नर्सरीमा पढ्दैछु, सिकाउन पहिला सिक्न जरुरी रहेछ – NawalpurTimes.com
छोरीसंगै नर्सरीमा पढ्दैछु, सिकाउन पहिला सिक्न जरुरी रहेछ
प्रकाशित : २०७८ जेठ २४ गते १५:२२
श्रीधर उपाध्याय –
म आफु सञ्चारकर्मी । छोरीलाई सिकाइका लागि म संग समय नहुने । साँझ आउँदा निदाउने । विहान भनेजस्तो नहुने । कहिले चाँडै निस्कनु पर्ने । उसको सिकाइको साथी बन्न पाएको थिइन । छोरी पाँच वर्ष पुरा भइन । पाँच वर्षमा एउटा बच्चाको ९० प्रतिशत मष्तिस्कको विकास भइसकेको हुन्छ । यो महत्त्वपूर्ण समय छोरीको सिकाइका लागि थियो । भर्खर विद्यालय टेकेकी छोरीका लागि सिकाइको निरन्तरता घाम छाँया जस्तै थियो । २०७६ चैत बाट २०७८ जेठ बीचमा मुश्किलले साढे ३ महिना विद्यालय जान पाइन होला । कोभिडको पहिलो लहरमा सिकाइका लागि उनि विद्यालयको प्राथमिकतामा थिइनन् । पहिलो लहरमा घरमै एबीसिडि र कखरा सिकाएको थिएँ । तर त्यो प्रयाप्त थिएन । महामारिमा झन् बढी अफिसका लागि समय दिनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यति बेला सिकाएको कखरा लेखेको कपी अहिले पनि सुरक्षित छ ।
दोस्रो लहरमा भने अनलाइन क्लासबाट भएपनि सिक्ने अवसर पाएकी छन् । ल्यापटप र मोबाइल अघि बसेर पढ्नु त्यति सहज होइन । माहामारिले नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । स्वीकार गर्नुपर्दछ । उनको अनलाइन क्लासको साथी मेरी श्रीमती हुन् । जेठ पहिलो साता उनि कोभिड १९ संक्रमित भएपश्चात उनको अनलाइन क्लासको साथी म भएको छु ।
विषयगत कुरा जानेर मात्र नहुने रहेछ । म स्नातकोत्तर गरेको छु भनेर मात्र हुँदैन । पढाउने लय हुन्छ । सिकाउने तरिका हुन्छ । एबीसिडि होस् या ककाकीकी लय र तरिका चाहिन्छ । यिनै कुराहरु उनको अनलाइन क्लासमा म सिक्न सकिन्छ की भनेर व्यग्र प्रतिक्षामा हुन्थेँ । उनि मोबाइल अघिको ऐनामा कपाल कोर्दथिन्, कति बेला नाच्दथिन पनि, कति बेला अनेक बहाना बनाउँथिन । यति गर्दा गर्दै पनि हामीले सोचे भन्दा पनि ज्ञानि भएर क्लासमा बसेकी थिइन । उनलाई ल्यापटपमा हेर भनेर कर गरिरहनु जायज लाग्दैनथ्यो ।
क्लास सकिएपछि मेरो क्लास सुरु हुन्थ्यो । मेरो क्लासको कुनै सिमाना हुँदैन, कुनै समय हुँदैन, जहाँ जतिबेला सम्झन्छु, अनलाइन क्लासमा उनलाई म्यामहरुले सिकाएका कुराहरुको चर्चा गर्न सुरु गरिहाल्छु ।
घरआँगनमा उनिसँग दौड प्रतियोगितामा खेलेँ। दौडिदा एबिसिडि भन्दै दौडिनुपर्ने नियम बनाएका थियाँै । अल्फाबेट भएको क्यालेण्डरमा इरेजरले हान्ने जुन लेटरमा लाग्दछ त्यहि लेटरबाट शब्द बनाउन थाल्ने । उनका खेलसमाग्रीमा १, २, ३ लेखेर छिरलिदिएर क्रम मिलाउन लगाउने । एक दिन उनको कक्षामा अपोजिट वर्ड (विपरितार्थक शब्द) पढाउनु भयो । त्यसपछि बाटोमा मान्छे देख्ने वित्तिकै उनलाई सोध्ने । बाटोमा हिँडेको मान्छे फ्याट कि थिन भनेर । टल कि सर्ट भनेर । यसरीनै गफिरहने गर्दथ्यौँ । एकदिन त आपत नै पर्यो । घर नजिक हिँडेका मान्छेलाई छोरी सुन्ने गरि बाबा फ्याट मान्छे भनि हालिन । त्यो मान्छेले हामीलाई पुर्लुक्क हेरे । म अर्को तिर फर्किएँ । हाँसो पनि लाग्यो, असहज पनि लाग्यो ।
आफ्ै अनुहारको मुड परिवर्तन गर्ने । हँसिलो अनुहार बनाउने । छोरी भन्दथिन, हेप्पी । दुखी अनुहार बनाउने । छोरी भन्दथिन, स्याड । एकदिन थकित मुद्रामा नजिक आउनुभएकी हजुरामालाई नाातिनीले भनिन्, आमा हेप्पी हुनुन, किन स्याड भएको ।
मामु आइसोलेसनमा रहँदा समय व्यवस्थापन मेरो लागि कठिन थियो । यहि कठिनका बीच उनको परिक्षा पनि थियो । अनलाइनबाटै परिक्षा दिइन । गणितको परिक्षा थियो त्यो दिन । शिक्षिकाले सोध्नुभएको सबै प्रश्नको जवाफ निर्धक्क दिइन । वाह छोरी बधाइ छ भन्दै थिएँ । मोबाइलमा म्यासेज आयो । प्रिन्सिपल सर, हिरालाल सरको म्यासेज रहेछ । सरले म्यासेजमा भन्नुभएको थियो । आइ एम सो ग्लाड टु सि अनुश्री इज सो कन्फिडेण्ट. बधाइ छ । सरको म्यासेजले पनि थप हौसला दियो । नजिकै बस्नुभएकी मेरी आमा मुस्कुराउनुभयो ।
उनिसंगको सबैभन्दा रमाइलो त लिफ आर्ट र थम्ब आर्ट कक्षामा भयो । उनिलाई सिकाउँदा आफैले पनि सिक्ने अवसर पाएँ । म आफुले पनि रमाइलो मानेँ । मैले इन्जोए गरेँ भने बच्चाले पनि सिक्न खोज्ने रहेछ । भोली लिफ आर्ट कक्षा छ भने अघिल्लो दिन नै म युट्युव सर्च गर्दथेँ र सिक्थेँ । छोरीलाई सिकाउँथे । छोरीलाई चाहिने शिक्षण समाग्रीको जोहो गरिदिन्थे । एउटा पिपलको पात लिन नारायणी किनार पुगेको छु । थम्ब आर्ट उत्तिकै रमाइलो थियो । छोरीको स्कीन एलर्जी भएको हुँदा कलर आँैलाले छुन दिइन । युट्युबबाट इयर बर्ड प्रयोग गर्न सकिने गज्जवको आइडियो मिल्यो । छोरीले इयर बर्डको प्रयोग गरेर पेण्टिङ गरिन । शिक्षण समाग्रीको व्यवस्थापनले छोरीलाई रचनात्मक बन्न सहजता मिलेको थियो ।
सिकाइका लागि विशेष समय चाँहिदैन, सिकाइका लागि विशेष परिवेश चाँहिदैन । सिकाइका लागि निश्चित समय र विशेष कक्षा चाँहिदैन । सिकाइका लागि विशेष पोशाक चाँहिदैन । सिकाइका लागि सिकाउनु पर्ने व्यक्ति कटिवद्ध भए पुग्ने रहेछ । सिकाइका लागि समर्पित हुन सक्नुपर्ने रहेछ । सिकाइका लागि प्रकृति पनि काफी छ । सिकाइका लागि समय निकालेर पलेँटी कस्न पर्दछ भन्ने होइन । हामी काम गर्दागर्दै, हामी बस्दा बस्दै, हामी खेल्दा खेल्दै, हामी यात्राको क्रममा, हामी घुमफिरको क्रममा अभिभावकले धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ । सिकाइका लागि अभिभावकले चाहेको खण्डमा सहज पनि छ । सिकाउन पनि अभिभावक स्वयंले पनि पहिला सिक्न जरुरी छ । के पहिला सिकाउने, के पछि सिकाउने ? यो महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ ।
(लेखक १०१.६ विजय एफएम गैंडाकोटका स्टेसन म्यानेजर हुन ।)